Tag: tahan'ny fifamofoana | Martech Zone
Tag: tahan'ny fifamofoana
Ahoana ny fanatsarana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny Marketing Digital
Zoma, Oktobra 19, 2018 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Nina Ritz
Tsy azonao atao ny mitazona izay tsy azonao. Rehefa mifantoka amin'ny fahazoana mpanjifa tsy tapaka dia mora ny entina. Eny ary, noho izany dia hitanao ny paikadin'ny fahazoana, nataonao mifanaraka amin'ny fiainan'ny mpanjifa ny vokatrao / serivisinao. Ny soso-kevitra momba ny sanda manokana (UVP) dia miasa - manintona ny fiovam-po izy ary mitarika ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Fantatrao ve izay hitranga aorian'izany? Aiza no ahitan'ny mpampiasa aorian'ny fahavitan'ny tsingerin'ny varotra? Atombohy amin'ny fahazoana ny mpihaino anao na dia izany aza